"Gabadha la kufasado 10 sano ayey ku qaadaneysaa iney soo kabato" - BBC News Somali
"Gabadha la kufasado 10 sano ayey ku qaadaneysaa iney soo kabato"
Image caption Zahra Leggese, oo takhasusutay cilmu nafsiga kana shaqeysa arrimaha bulshada
Daraasad lagu sameeyey xadgudubyada jinsiga ee dumarka loo geysto oo uu kufsiga ka midka yahay ayaa sheegtay iney dumarka dhibaatadaas ay ka soo kabtaan ay ku qaadaneyso sanado badan.
Darsaddan waxaa lagu soo qaatay xadgudubyo jinsi oo aad u fool xun oo ka dhacay dalka Itoobiya, haddaba sharciga in mudda ah ka daahsoonaa.
Rahel waxay ahayd gabar jaamacad kaga qalin jabisay cilmiga 'Civil Enginer', waxay shaqo ka heshay magaalada Addis Ababa.
Maalin maalmaha ka mid ah iyada oo Taksi saaran oo u socota danaheeda waxay isku barteen wiil lagu magacaabo Kadir.
Dhalinyardi isbaratay waxay billaabeen iney sheekeystan ilaa gariga ay saarnaayeen oo ka gaarsiinayey halka ay ku socdeen, lambarka teleefannada ayaa la isdhaafaaday, xiririirka labada qof ee dhalinyarada ah inuu jeceyl uu u gudbo waxay ku qaadatay wax ka yar hal bil.
Hase ahaatee, jeceylki labada dhalinyaro ka dhex bilowday inta uusan miradhal noqon, bishi Agosto ee sannadki hore Kadir wuxuu dilay gabadhi uu jeceylka ka dhaxeeyey ee Rahel.
Haddaba booliska ,maamulka magaalada Addis Ababa oo in mudda ah waday baaritaan kiiskan la xiriira dilka Rahel. Dilaaga gabadhaasi marka gacanta lagu soo dhigayna wuxuu Kadir booliska hortiisa ka qirtay sida foosha xumeed uu gabdhaasi u dilay.
Xilliga ay booliska gacanta ku soo dhigayeen, Kadir wuxuu iska jilayay noloshiisa caadiga ah isaga oo naag kale guursaday oo nolol farxad leh ku noolaa.
Booliska Addis Ababa oo shaaciyey kiiskaasi iyo marxaladaha baaritaankiisa loo maray wuxuu sheegay in sagaalki bilood ee la soo dhaafay 13 gabdhood lagu dilay magaalada Addis Ababa oo keliya ah.
Tacaddiyda dumarka lagula kacay waxay dadka inta badan u arkaan inuu ku kooban yahay Kufsiga oo waxyeella jireed u geysto gabadha dhibka uu soo gaaray balse Khubarada cilmu nafsiga waxay sheegayaan gabdha xadgudub dhinaca jisniga la kulanto iney ka dhaxsho ugu yaraan shan dhibaato oo aad u waweyn, dhibaatooyinkaas oo loo kala qaado niyadjab, mid jireed, mid maskaxeed, mid jinsi iyo mid dhaqaale.
Iney had iyo jeer ooydo
Zahra waxay sheegeysaa dhibaatada ugu weyn oo ay haweenka xadgudubka jinsiga loo geysta ay la kulmaan waxay tahay dhibaatada maskaxeed.
"Kalsoonida ayaa ka lumeyso, shaki ayaa ku beermaya, cabsi badan ayaa galeysa, haddii ay guursadaan ama ay rag xiriir la sameeystaanna markiba wey kala tagayaan, gooni u socod ayay noqoneysaa" ayey Zahra sii raacisay.
"Dumarka inta badan ragga dhibaatada uga timaadda ayaa waxay tahay hadallada beenta lagu soo jiito marki dambana sababa gabadha noolasheeda inta ka dhiman dhibaata saameyn ku yelato iney la kulanto ayey tri."
Dhibaatooyinka dhaqaale ee la soo darsaya
Zahra Leggese, oo takhasusutay cilmu nafsiga kana shaqeysa arrimaha bulshada waxay sheegeysaa dumarka kufisga iyo xadgudubyada kale ee jinsiga ee lagula kaca waxyeellada maskaxeed ee ay la kulmaan waxaa u dheer mid dhaqaale.
"Gabdhaha waxyeellada soo gaartay haddii ay ilma dhasho waxaa soo foodsaaraya cadaadis dhaqaale" ayey tiri.
"Carruurta oo u baahan kharash waxbarashada looga bixiyo, nolosha ilmheeda oo ay ka faala qaaddo iyadana ay dhibaatada ka soo kabato dhibaatooyinkaasi oo dhan oo isbiirsaday haweeneydu dhibka soo gaaray iney ka gudubto waxay ku qaadeyneysaa ilaa iyo 10 sano"
Arrimaha xadgudubka jinsiga gacanta ka geysta
Waxyaabaha xadgudubka jinsiga gacanta ka geysta ayay khubaradu ku tilmaameen inuu kow ka yahay jeceylka qarsoodiga ah.
"Da'yartu wiil ama gabar marka uu jeceylka ugu horreeya haleela waxaa dabeecad u ah iney ishdaafsadaan farriimo aan kala joogsi lahayn farriimahaasi oo mararka qaar horseeda xadgudub jinsi uu kufsiga ka mid yahay " ayey tiri Zahra Leggese.
Raggana marka uu jeceylka ugu horreeya la wadaago gabar wuxuu isku dayaa tallaabo kasta oo ay gabadha qaadeyso inuu aad ula socdo iyada oo aan fasax ka qaadanna ay meel u dhaqaaqin.
"Haddii waxbarasho ay aaddo waa iney tirahdo waxbarashadaaan aaday, guriga markay tagto guriga ayaan gaaray tirahdaa, saaxibbadeed markay la joogtana ay ka warbixiso cidda ay la joogto dabagalka adag ee noocaasi ah waxay gabadha jeceylka uu hayo ay ku abuurtaa iney dadka kale oo dhan xiriirka u jarto qof ay jeceshahay mooyee, arrimahaasi oo dhan waxay albaab u furayaan inuu khilaaf yimaado" ayey tiri.
Xadgudubyada jinsiga Miyi iyo Magaalo
Asnaaqach Tilaahuun waa gabar 26 jir oo ku dhalatay magaalada Ambo kuna soo barbartay magaalada Bishooftu ee dalka Itoobiya.
Hooyada Asnaaqach dhashay maadaamaa ay dhimirka wax ka qabtay iyaga oo yaryar ayay iyada iyo seddex carruur oo la dhalatay isaga tagtay. si ay noolashooda u kaafiyaanna waxay ka shaqeeyaan guriyaha dadka.
Inta ay joogtay magaalada Bishoftu waxay shaqa ka heshay guri uu lahaa nin beeraley ah, ninki beeraleyda ahaa ee ay u shaqeeyneysay ayaa maalin maalmaha ka mid ah meel cidla ah ku helay wuuna kufsaday.
'Waa kud ka guur oo qanja u guur', noolasha Asnaaqach oo adka u liidatay kufsigi ayey guur ku qadday, sadkeeda markay dhammeysatayna waxay dhashay ilmihi.
Daraasaad arrimahan horay looga sameeyeyna waxay sheegayaan waddamada soo korayo oo ay Itoobiya kow ka tahay afarti dumar ee waddamadaasi ku nool waxay la kulanta mid kamid ah xadgudyada jinsiga.
"Gabadha diintey doontaba ha haysato, qabiilkey doontana ha ka soo jeedda, waxay ka dhigan tahay inuu xadgudub jinsi nolosheeda la soo darsi karo" ayey leeyihiin khubaradu.
Dumarka xadgudubka loo geysto iyo caddaaladda
Dumarka xadgudubka jinsi lagula kaco intooda badan caddaalad ma helaan, maxaa yeelay cadaadiska ugu horreeyaba waxay kala kulmaan waaliddiintooda ama qoyskooda.
Dhinaca kalane, waxay cadaadis kala kulmaan ciddi dhibka u geystay oo ay hanjabaadyo uga yimaaddan oo ku yirahdo haddii aad arrintan sharciga geyso nafta ayaan kaa qaadayaa iwm.
"Marka dumarka xadgudubka jinsi loo geysto miyi magaalo meeshay doonaanba ha ku noolaadaane dhibka soo gaaray si ay uga soo kabtaan, caddaaladna ay u helaan waxaa loo baahan yahay in la helo xaruun lagu hayo, xaruumaha kooban ee hadda jirana ma aha kuwa ku ffilan" ayey tiri Zahra Leggese, oo takhasusutay cilmu nafsiga kana shaqeysa arrimaha bulshada.